ကြားသိသမျှ Archives - Thuta Music
ဖဖေေ ရောကျသှားတာ စဈမွပွေငျတခု…ရငျဘတျကွီးကှဲထှကျသှားတဲ့နပေ့ါ သမီးလေးရေ ….
တဦးတညျးသောသမီးလေး လမျးပျေါထှကျတာ စိတျမပူဘူးလား လို့ သူမြားတှမေေးရငျ… သမီးကို စိတျမပူဘူး … လို့ပဲ ကနြျောပွနျဖွနေခေဲ့တာ… သမီးက သှကျတဲ့ကလေး …ထကျတဲ့ကလေး … ငယျငယျလေးကတညျးက ဖဖေဂေုဏျယူခဲ့ရတဲ့သမီးလေး … Gz လေးတယောကျမို့ … ဒီမိုကရစေီတိုကျပှဲမှာ သူစိတျအားထကျသနျသလို…. တထောငျ့တနရောက ပွညျသူနဲ့အတူ ရှိနခေဲ့တဲ့ သမီးလေး … ခဈြလှနျးလို့ ပျုးဥလေးလို မှေးထားပမေဲ့… တိုကျကှမျဒိုတှေ ကရာတေးတှဝေါသနာပါတော့လညျး သငျခိုငျးစခေဲ့တာပါပဲ … သမီးလေးက…ဖဖေအေ့သညျးကြျောလေးမို့…. ဖဖေဆေံ့ပငျဆေးဆိုးတာကအစ သမီးလကျလေးနဲ့… ထိတှမှေ့ ဖဖေစေိတျတိုငျးကတြာ… မနကျက သမီးသူငယျခငျြးတှေ နဲ့အတူ ထှကျသှားတယျ… သမီးတို့Gz လေးတှရေဲ့ ကြောပွငျလေးတှေ ငေးရငျး …. ခါတိုငျးလိုပဲ………… နလေ့ညျသမီးပွနျလာမဲ့အခြိနျစောငျ့ပီး…. keyboard ဖိုကျတာလုပျဖို့က ဖဖေတေ့ာဝနျလေ… နလေ့ညျ ph … Read more
မကှေးတိုငျး စလငျးမွို့က (၅) ဘာသာဂုဏျထူးရှငျလေး ကညျြထိလို့ ဆုံးပွနျပီ မကှေးတိုငျး စလငျးမွို့က5ဘာသာဂုဏျထူးရှငျမောငျလေး ဒီနကေ့ညျြထိမှနျလို့ သေ ဆုံး သှားပါ ပွီ။ RIPပါမောငျလေးရေ ဒီနှကေတော့အဖူးလေးတှကေို ရှေးခွှနေသေလိုပါဘဲလား😔😔 #crd မွနျမာပွညျကွီး အမွနျဆုံး ငွိမျးခမျြးပါစေ အေးခမျြးပါစေ မွနျမာပွညျ Zawgyi မကွေးတိုင်း စလင်းမြို့က (၅) ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်လေး ကျည်ထိလို့ ဆုံးပြန်ပီ မကွေးတိုင်း စလင်းမြို့က5ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်မောင်လေး ဒီနေ့ကျည်ထိမှန်လို့ သေ ဆုံး သွားပါ ပြီ။ RIPပါမောင်လေးရေ ဒီနွေကတော့အဖူးလေးတွေကို ရွေးခြွေနေသလိုပါဘဲလား😔😔 #crd မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းပါစေ အေးချမ်းပါစေ မြန်မာပြည်
သူ့ရဲ့ပရိသတျ သူရဲကောငျးမလေး Angelကွယျစငျအတှကျ ထှနျးထှနျးရဲ့ဝမျးနညျးစကား ထှနျးထှနျးကတော့ ဆယျစုနှဈတဈခုကြျောလောကျက နှုတျခမျးနီမလေးတှေ သညျးသညျး လှုပျအားပေးခဲ့ကွတဲ့ “Example”အဖှဲ့ရဲ့အဖှဲ့ဝငျတဈဦးပဲဖွဈပါတယျ။နောကျပိုငျးမှာတော့ သီးခွားအဆိုတျောတဈယောကျအနနေဲ့ သီခငျြးတှသေီဆိုခဲ့တဲ့အပွငျ သရုပျဆောငျပိုငျးမှာလညျးအကယျဒမီရရှိခဲ့ပါတယျ ။ ပရိသတျကွီးရေ လတျတလောမှာတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ နိုငျငံရေးပဋိပက်ခတှကွောကွှလှေငျ့ခဲ့ရတဲ့ လူငယျလေးတှတေဈစတဈစမြားလာတာတှရေ့ပါတယျ။ အဲဒီထဲမှာမှဒီကနေ့ ကွှလှေငျ့ခဲ့တဲ့ Angle ကွယျစငျလေးဟာ ထှနျးထှနျးရဲ့အမာခံပရိသတျလေးလို့သိရပါတယျ။ ထှနျးထှနျးအနနေဲ့ လညျးပွောစရာစကားမရှိအောငျကိုဝမျးနညျးရပါတယျလို့ပွောဆိုထားပါတယျ။ ယနေ့ ပဈခတျမှုကွောငျ့ ကှယျလှနျခဲ့ပွီဖွဈတဲ့ မကွယျစငျနဲ့ ပတျသကျလို့ အဆိုတျော၊သရုပျဆောငျထှနျးက”ကောငျးရာသုဂတိလားပါစေ ညီမလေး Angelရေ.။ငွိမျးခမျြးစှာအနားယူပါတော့။ဖျောပွစရာစကားလုံးမရှိအောငျ ဝမျးနညျးရပါတယျ.”လို့ ဝမျးနညျးစကားပွောခဲ့ပါတယျ။ Credit Zawgyi သူ့ရဲ့ပရိသတ် သူရဲကောင်းမလေး Angelကြယ်စင်အတွက် ထွန်းထွန်းရဲ့ဝမ်းနည်းစကား ထွန်းထွန်းကတော့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်လောက်က နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ သည်းသည်း လှုပ်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ “Example”အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ သီးခြားအဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သီချင်းတွေသီဆိုခဲ့တဲ့အပြင် သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းအကယ်ဒမီရရှိခဲ့ပါတယ် ။ ပရိသတ်ကြီးရေ လတ်တလောမှာတော့ … Read more
ကျရှုံးသွားတဲ့သားအတွက် မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်နင့်နင့်နဲ့ ရေးတဲ့စာ
ကျရှုံးသွားတဲ့သားအတွက် မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်နင့်နင့်နဲ့ ရေးတဲ့စာ “မခံစားနိုင်ဘူးသားရယ် မေမေမဖြေနိုင်သေးဘူး” “သား””သားလေး””ခေါင်းအုံးအောက်မှာသားပိုက်ဆံထားခဲ့တယ်လေငါးထောင်တန်တွေ””မေမသုံးဖို့ဆို” “၂၆ရက်နေ့က””မေမေအခုမှတွေ့တယ်သားရဲ့””မေမေသွားမကြည့်နိုင်ဘူး သားထားခဲ့တဲ့ပိုက်ဆံ” “ဖုန်းကိုလည်းမေမေမကြည့်နိုင်ဘူး သားပုံတွေချည်းပဲတက်တက်နေလို့” “မေမေဘယ်လောက်ချစ်တယ်သိလားသား” “အခုမှချစ်ပြနေတာမဟုတ်ဘူး မွေးကတည်းကမေမေကချစ်တာလေသားတို့ကို” “မေမေကသားကိုလည်းချစ်တယ် သားကြီးကိုလည်းမေမေအရမ်းချစ်တာ” “မေမေအမြဲဂုဏ်ယူတယ်လေ မေမေ့သားလေးတွေ ပညာတော်တဲ့အကြောင်း စာတော်တဲ့အကြောင်းကြွားရတာအမော” “သားက စာလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး ကိုကို့ကိုပဲကျောင်းထားလိုက်ပါဆိုပီးအရမ်းသိတတ်တဲ့သားလေး” “အမယ်လေး စာတော်တဲ့ကလေးပညာတတ်တဲ့ကလေးမှရွေးပစ်တာလားဒီအမြွှာလေးပဲရှိတာလေမေမေ့မှာ အခုတော့ဘက်ပဲ့သွားပြီပေါ့” ဒီပြင့်ကလေးတွေကိုလည်းမပစ်စေချင်ပါဘူး ငါ့လိုရင်တွေနာတဲ့ဒဏ်ကိုမခံစားစေချင်ဘူး” “ရင်တွေကွဲတယ် ရင်တွေကွဲတယ်”ဒီမှာကြည့်ပါဦး” “သားလေးမသေရင်ကောင်းမယ်နော်” RIPပါကိုညီညီအောင်ထက်နိုင်ရေ😔💔 မိ့သားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါတယ်ငါတို့တွေတခွန်းတည်းပြိုင်တူအော်မယ် “ကမ္ဘာမေကြဘူး” #စစ်အာဏာရှင်ကျရှုံးပါစေ #Crd ကရြှုံးသှားတဲ့သားအတှကျ မိခငျတဈယောကျရဲ့ ရငျနငျ့နငျ့နဲ့ ရေးတဲ့စာ “မခံစားနိုငျဘူးသားရယျ မမေမေဖွနေိုငျသေးဘူး” “သား””သားလေး””ခေါငျးအုံးအောကျမှာသားပိုကျဆံထားခဲ့တယျလငေါးထောငျတနျတှေ””မေမေသုံးဖို့ဆို” “၂၆ရကျနကေ့””မမေအေခုမှတှတေ့ယျသားရဲ့””မမေသှေားမကွညျ့နိုငျဘူး သားထားခဲ့တဲ့ပိုကျဆံ” “ဖုနျးကိုလညျးမမေမေကွညျ့နိုငျဘူး သားပုံတှခေညျြးပဲတကျတကျနလေို့” “မမေဘေယျလောကျခဈြတယျသိလားသား” “အခုမှခဈြပွနတောမဟုတျဘူး မှေးကတညျးကမမေကေခဈြတာလသေားတို့ကို” “မမေကေသားကိုလညျးခဈြတယျ သားကွီးကိုလညျးမမေအေရမျးခဈြတာ” “မမေအေမွဲဂုဏျယူတယျလေ မမေသေ့ားလေးတှေ ပညာတျောတဲ့အကွောငျး … Read more
ကြွေလွင့်သွားတဲ့ အသက် ၁၉နှစ်အရွယ် မကြယ်စင်ရဲ့ ပြေးလွှားနေတဲ့ (ရုပ်သံ)
ဒီနေ့ကြွေလွင့်ခဲ့တဲ့ Angel က သွေး၊ မျက်ကြည်လွှာ၊ ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကို လှူဒါန်းခဲ့ ယနေ့ မန္တလေးမြို့ ၈၄ လမ်းနှင့် လမ်း ၃၀ တွင် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် နေရာတင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့သော မကြယ်စင်မှာ အသက် ၁၉ နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ မန်းလေး အေးအေးမြင့်ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်က တစ်ဦးတည်းသောသမီးဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ် သူမ မသေဆုံးခင်က သွေး၊ မျက်ကြည်လွှာ၊ ခန္ဓာရဲ့မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမဆို လှူမည့်အကြောင်း သွေးအမျိုးအစားနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်ကို ရေးသားကာ စာရွက်စာတမ်း နဲ့ဆိုရင်တောင် angel အသက်သေမှာ လှူခွင့်ရမှာ တကယ်လိုအပ်ခဲ့ရင် angel အသက်မသေလဲ အသေခံပြီး angel လှူပါတယ် လို့ ဖေ့ဘုတ်မှာ ရေးသားထားခဲ့တာကို တွေ့ရလို့ ပြည်သူများက လွန်စွာဝမ်းနည်းနေကြပါတယ် ဒီနကွေှ့လှေငျ့ခဲ့တဲ့ … Read more
ရှိသမြှခှနျအားနဲ့ တတျနိုငျသလောကျပွညျသူတှကေို ဒီကပျဆိုးကွီးကနရေုနျးထှကျနိုငျဖို့ ရငျဆိုငျဖွရှေငျးသှားမယျလို့ဆိုလာတဲ့ ပိုငျတံခှနျ
ရှိသမျှခွန်အားနဲ့ တတ်နိုင်သလောက်ပြည်သူတွေကို ဒီကပ်ဆိုးကြီးကနေရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ဆိုလာတဲ့ ပိုင်တံခွန် ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာနိုင်ငံသာမက ပြည်ပနိုင်ငံတွေအထိ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအောင်မြင်မှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူလေးကတော့ မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပိုင်တံခွန်က သူမတူတဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အနုပညာအရည်အချင်း ပြည့်ဝသူဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေသာမကပဲ အနုပညာရှင်အချင်းချင်းကပါ အားကျအချစ်ပိုကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မွန်မြတ်တဲ့ စိတ်ထားနဲ့ အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်တတ်တဲ့ သူက ယခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ပြည်သူတွေရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူရဲ့ ဖေ့ဘွတ်အကောင့်မှာလည်း စာသားအချို့ကို တင်ပေးလေ့ရှိတာဖြစ်ပြီး ယနေ့မှာလည်း ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ ” ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ နေ့တိုင်း ဘုရားဝတ်ပြုတဲ့ အခါ ရွတ်ရတဲ့ ကပ် (၃)ပါး ဆိုတာ … Read more